Do you have any questions? ﻿
Tags: the most common interview questions employers employee.
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားကောင်းသူတွေအတွက် အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နောက်ဆုံးမေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်ကို တကယ်စိတ်ပါဝင်စားခဲ့ရင် မေးစရာမေးခွန်းဆိုတာ ရှိနေစမြဲပါ။ ဒါကြောင့် မေးလိုတဲ့ မရှင်းတဲ့ မေးခွန်းပေါင်များစွာက အင်တာဗျူးဝင်သူတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာ ဘယ်မေးခွန်းကို အရင်စမေးမလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
အရင်ဆုံး အရေးတကြီး သိဖို့လိုအပ်တာတွေကို အစဉ်လိုက် ချရေးပါ။ တစ်ချို့မေးခွန်းက အဖြေများစွာကို တစ်ခါတည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို သိခွင့်ရရင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေကိုပါ တစ်ပါတည်း သိခွင့် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေးကြီးဆုံးကနေ အရင်စမေးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
နောက်ဆက်တွဲ သိထားသင့်တာက မေးခွန်းတိုင်းအတွက် အဖြေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်က အကင်းပါတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို အလုပ်ရှင် ဒါမှမဟုတ် အင်တာဗျူးသူက မှတ်ချက်ပြု အမှတ်ပေးခြင်း ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ www.jobless.com.mm